Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #FXG Fincila Xumura Gabrummaa jechuun Maal jechuudhaa?
#FXG Fincila Xumura Gabrummaa jechuun Maal jechuudhaa?
FXG eenyuun ilaallata? FXG irratti hirmaachuu dhiisuun boonnisa maali fida?
Gaaffilee Sadan (3) Olii kana gabaabumatti tokko tokkoon kaafnee haa ilaallu.
1) FXG Maal jechuudha? FXG jechuun nu gahe, dinne, hin barbaannu, halagaan bitamuun qaaniidha, murni bicuun uummata guddaa kana bituun qaaniidha, fafa, .... kkf yoota'u.Hin Bitamu Biyya Kiyya irratti abbaan biyya ana jedhanii tokkommaan ka'un falmachuu jechuudha.
2) FXG eenyuun ilaallata? FXG Uummata Oromoo hunda ilaallata. Kuni jechuun xiqqaaf guddaa, barataaf wallaalaa , jaarsaaf jaartii otoo hin jenne hundi akka dandeettiisaa fi beekkumsa isaatti irratti hirmaata. Hawaasini Oromoo hundi akka jireenya isaatiin irratti bobba'a. Yeroo kana jennu:- A) Daldalaa:- Daldalaan murna bicuu ala irraa seentee uummata koo cunqursu waliin hin nagadu, hn gurguru, hin bitu gibiras hin kaffalu jechuun itti fincila jechuudha. B) Humna Loltuu:- Loltuu yeroo jennu poolisa, humna tikaa, Raayyaa ittisa biyya walii galaa kan Oromoo ta'an hunda jechuudha. Humni kun lakki ani ashkara , waardiyaa siif hinta'u, uummata kiyyatti hin dhukaasu, siif hin lolu, ani wabii uummata kiyyati malee konoleeffattu of irrattii fi uummata kiyya akka silmii hin xuuxxu jechuun gaaffi uummata isaa cina dhaabbachuun dirqama isaati. Loltuun diina cina hiriiree uummata isaa ajjeese carraan bori isa muudatu baayyee hamtuudha. Yeroon ka'ee uummata isaa cina hiriiruun guyyaan har'a. Qeerroon isa yaamaa jirti#Qeerroof Owwaachuun Dirqama qaama hundaati. Kunis haadhasaa, Abbaa isaa, Obboleessa isaa, obboleettii isaafi Uummata Keessa ba'e walumaa galatti hin ajjeesu gaaffiin isaanii gaaffii kooti jechuu qaba, Dirqama. C) Barataa:- Lakki nuti namoota barate , qaroodha, yeroon yeroo jaarraa 21ffa keessa jirra , barri bara #Tekinooloojiiti Uummatni Keenya ilmaansa barataniin buluu qabu, oromaaf hin bullu dinne , oromoon uummata guddaa kan namaan bulu otoo hin taane ormaafuu wabii ta'uu kan danda'udha jechuun Abbootii isaafi Haadhotii isaa kan otoo hin baratin isaan barsiiseef ija ta'anii abukaattummaa dhabbachuufii, dammaksuu mirga keetiif ka'ii loladhu jechuun dhugaa jiru maatii isaatti humuun ficilee fincilchiisuu. D) Qotee Bulaa:- Qabeenya isaa gabaatti baasee gurguruu diduu, gibira kaffaluu diduu, gurmuun wal-bira dhaabbachuun karaa isa keessa qaxxaamuree darbu cufuu, wal dhoksuu waliif laachuu, wal obaasuu, diina isaa ittiin ooduu, malkaa hunda itti cufuu. E) Barsiisaa:- Barsiisaan Seenaa dhugaa ijoollee barsiisuun qaruu, haala addunyaan har'a irra jiru hubachiisuu, eenyummaa uummata isaaf akka hadoodan gadi fageenyaan akka gara uummataatti bu'u daa'imman hubachiisuu , dargageessi akka ka'ee mirga isaaf lolatu hubachiisuu, uummata bilisa qabuu fi biyya qabutu kabaja qaba jedhee daa'imman hubachiisuu isaan booda daa'imni galanii akka uummata isaanii hubachiisan itti himuu.F) Abbaa Seeraa:- Abbaan Seeraa Haqa uummata isaaf kennuu, halagaa otoo hin taane dhugaa jiru uummata isaaf kennuu. Qulqullinaan gadhiisuu, ragaa sobaa hanbisuu. G) Walumaa galee Hawaasni Halgaa ittiin ooduu, irraa bituu fi itti gurguruu dhiisuu, Humna Raayya ittisa Biyyaa Keessatti 100% itti hirmaachuu diduu qaba. Konkolaataa halgaa yaabbachuu diduu, Awwaalcha Halagaa dhaquu diduu, Meeshaa Ofii Halagaatti gurguruu dhiisuufi irraas bituu diduu. #FXG walumaa galatti ergamuu diduufi si arguu hin fedhu bayi biyya kooti abbaan biyyaa anaa jechuun itti fincilu.
3) Qaamni FXG irratti hin hirmasnne maal ta'uu qaba kan jedhu. Qaamni kun akka diina cina dhaabbatee itti ilaalamee bakka hundatti lukkee diinaa ta'ee waan jiruuf isas ta'e qabeenya isaa barbadeessuu, yoo du'e waalcha isaa dhaquu dhiisuu, awwaaluus diduu, hadaamii itti ijaaruu, itti gurguruu dhiisuu, dubbisuu dhiisu, ittiin ooduu, bilisummaa booda dhiigdi namoota qabsoof du'anii hundi harka isaa irra jiraachuu akka beeku ammumasn beekuu qaba. Hiree uummata oromoo waliin akka hin qabnesi hubachuu isa barbaachisa.
#Namootiin tokko tokko yeroo oromummaa koo maaltu narraa fudhata kan jedhan ni jiru . Oromummaa dhalootaan argate tiskachuu waan hin dandeenyeef Uummata Oromootu isa muluqa. Hiree Oromummaaa hin qabu.
Posted by Hasan Ismail at 7:28 PM